လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီအသင်းကို ကြမ္မာဆိုးတစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပါတယ်
ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ စပိန်တို့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးကို ဂျာမနီအသင်း ရှောင်လွဲနိုင်မလား
19 Jun 2018 . 12:41 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီက မော်ကြွားခဲ့တဲ့ ဂျာမန်ပရိသတ်တွေ အခုအချိန်မှာတော့ သူတို့အသင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်နေရပါပြီ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ ဂျာမနီအသင်းဟာ လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်း၊ အခုကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲဖို့ ထိပ်ဆုံးက ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်း စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ ရုရှားမြေကို ချီတက်လာခဲ့တာပါ။ ဂျာမနီအသင်းရဲ့ ကစားသမားစုဖွဲ့မှုကလည်း အားရစရာအနေအထားရှိတာကြောင့် ဂျာမနီအသင်းအနေနဲ့ အီတလီ(၁၉၃၄၊ ၁၉၃၈)၊ ဘရာဇီးလ် (၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂)တို့နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလား(၂)ကြိမ်ဆက် ဗိုလ်စွဲနိုင်တဲ့ တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်ဖို့ မျှော်လင့်လို့ရတဲ့အနေအထားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာပဲ မက္ကဆီကိုအသင်းကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် ဂျာမနီအသင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေက မရေမရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ဂျာမနီအသင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာမှတ်တမ်းတစ်ခုကလည်း စောင့်ကြိုနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဖလား(၄)ကြိမ်မှာ လက်ရှိချန်ပီယံအသင်းတွေ အုပ်စုအဆင့်က စောစောစီးစီးထွက်ခဲ့ရတာက (၃)ကြိမ်အထိရှိနေလို့ပါပဲ။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်စွဲခဲ့တဲ့ ပြင်သစ် ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရတယ်၊ ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ အီတလီအသင်း ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ အုပ်စုက ထွက်ခဲ့ရသလို၊ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ စပိန်အသင်းလည်း ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက စိတ်ပျက်စရာရလဒ်တွေနဲ့အတူ အုပ်စုအဆင့်ကပဲ လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်။
၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ ဘရာဇီးလ်တစ်သင်းပဲ အဲဒီကြမ္မာဆိုးကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းက ၁၉၆၂ နောက်ပိုင်းကစပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအသင်း နောက်တစ်ကြိမ်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်အထိ တက်ခဲ့ဖူးတာဆိုလို့ အာဂျင်တီးနား(၁၉၈၆ – ဗိုလ်စွဲ ၁၉၉၀ – ဒုတိယ)၊ ဘရာဇီးလ် (၁၉၉၄-ဗိုလ်စွဲ၊ ၁၉၉၈-ဒုတိယ)တို့သာရှိခဲ့တာပါ။
အခုလည်း လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျာမနီအသင်း အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာပဲ ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာကြောင့် အရင်အသင်းတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကံကြမ္မာဆိုးက ဂျာမနီအသင်းကိုလည်း ထိုးနှက်တော့မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ဂျာမနီအသင်းဟာ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တုန်းက အယ်လ်ဂျီးရီးယားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတစ်လျှောက် ဒုတိယမြောက် အုပ်စုအဖွင့်ရှုံးပွဲနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်သလို ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံအသင်းတွေ အုပ်စုအဖွင့်မှာ (၃)ကြိမ်ဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်(၂၀၁၀-အီတလီ ၁-၁ ပါရာဂွေး၊ ၂၀၁၄-စပိန် ၁-၅ နယ်သာလန်)။ ဂျာမနီအသင်းနည်းပြဂျိုအာချင်လိုး Joachim Low ကတော့ မက္ကဆီကိုကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ သွေးပျက်သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ အသင်းကို အပြောင်းအလဲလုပ်မှာ မဟုတ်သလို ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို သေချာပေါက်တက်မယ်လို့ ကတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်။ ဂျာမနီအသင်းရဲ့ လက်ကျန်နှစ်ပွဲကို ကြည့်ရင်လည်း ဆွီဒင်၊ တောင်ကိုရီးယားအသင်းတို့နဲ့သာ ကစားရမှာဖြစ်လို့ အခြေအနေတော့ ကောင်းနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှားလုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။ ဂျာမနီအသင်း အရင် လက်ရှိချန်ပီယံတွေလို ကံကြမ္မာဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလား၊ ကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုတာတော့ လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ် . . . .
Photo: THE CHRONICLE,Premier League,ESPN,SB Nation,Sportsnet
ပွငျသဈ၊ အီတလီ၊ စပိနျတို့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ကံကွမ်မာဆိုးကို ဂြာမနီအသငျး ရှောငျလှဲနိုငျမလား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမတိုငျမီက မျောကွှားခဲ့တဲ့ ဂြာမနျပရိသတျတှေ အခုအခြိနျမှာတော့ သူတို့အသငျးအတှကျ စိုးရိမျစရာအခွအေနတေဈခုကို ရငျဆိုငျနရေပါပွီ။ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျးပဲ ဂြာမနီအသငျးဟာ လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အသငျး၊ အခုကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျစှဲဖို့ ထိပျဆုံးက ရပေနျးစားနတေဲ့အသငျး စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှနေဲ့ ရုရှားမွကေို ခြီတကျလာခဲ့တာပါ။ ဂြာမနီအသငျးရဲ့ ကစားသမားစုဖှဲ့မှုကလညျး အားရစရာအနအေထားရှိတာကွောငျ့ ဂြာမနီအသငျးအနနေဲ့ အီတလီ(၁၉၃၄၊ ၁၉၃၈)၊ ဘရာဇီးလျ (၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂)တို့နောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလား(၂)ကွိမျဆကျ ဗိုလျစှဲနိုငျတဲ့ တတိယမွောကျအသငျးဖွဈဖို့ မြှျောလငျ့လို့ရတဲ့အနအေထားပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာပဲ မက်ကဆီကိုအသငျးကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ ဂြာမနီအသငျးရဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေ မရမေရာဖွဈလာခဲ့တယျ။
ဂြာမနီအသငျးအတှကျ စိုးရိမျစရာမှတျတမျးတဈခုကလညျး စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။ အဲဒါကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ကမ်ဘာ့ဖလား(၄)ကွိမျမှာ လကျရှိခနျြပီယံအသငျးတှေ အုပျစုအဆငျ့က စောစောစီးစီးထှကျခဲ့ရတာက (၃)ကွိမျအထိရှိနလေို့ပါပဲ။ ၁၉၉၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလျစှဲခဲ့တဲ့ ပွငျသဈ ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစုက ထှကျခဲ့ရတယျ၊ ၂၀၀၆ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ အီတလီအသငျး ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ အုပျစုက ထှကျခဲ့ရသလို၊ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ စပိနျအသငျးလညျး ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက စိတျပကျြစရာရလဒျတှနေဲ့အတူ အုပျစုအဆငျ့ကပဲ လကျပွနှုတျဆကျခဲ့ရတယျ။
၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံ ဘရာဇီးလျတဈသငျးပဲ အဲဒီကွမ်မာဆိုးကို ကြျောလှားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့နဲ့ပဲ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။ နောကျထပျထူးခွားတဲ့မှတျတမျးက ၁၉၆၂ နောကျပိုငျးကစပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအသငျး နောကျတဈကွိမျပွိုငျပှဲမှာ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့အထိ တကျခဲ့ဖူးတာဆိုလို့ အာဂငျြတီးနား(၁၉၈၆ – ဗိုလျစှဲ ၁၉၉၀ – ဒုတိယ)၊ ဘရာဇီးလျ (၁၉၉၄-ဗိုလျစှဲ၊ ၁၉၉၈-ဒုတိယ)တို့သာရှိခဲ့တာပါ။
အခုလညျး လကျရှိခနျြပီယံ ဂြာမနီအသငျး အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာပဲ ရှုံးပှဲတှခေဲ့တာကွောငျ့ အရငျအသငျးတှေ ရငျဆိုငျခဲ့ရတဲ့ ကံကွမ်မာဆိုးက ဂြာမနီအသငျးကိုလညျး ထိုးနှကျတော့မလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
ဂြာမနီအသငျးဟာ ၁၉၈၂ ခုနှဈတုနျးက အယျလျဂြီးရီးယားကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ကမ်ဘာ့ဖလားသမိုငျးတဈလြှောကျ ဒုတိယမွောကျ အုပျစုအဖှငျ့ရှုံးပှဲနဲ့ ကွုံတှခေဲ့တာဖွဈသလို ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံအသငျးတှေ အုပျစုအဖှငျ့မှာ (၃)ကွိမျဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ(၂၀၁၀-အီတလီ ၁-၁ ပါရာဂှေး၊ ၂၀၁၄-စပိနျ ၁-၅ နယျသာလနျ)။ ဂြာမနီအသငျးနညျးပွဂြိုအာခငျြလိုး Joachim Low ကတော့ မက်ကဆီကိုကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့လို့ သှေးပကျြသှားမှာ မဟုတျဘဲ အသငျးကို အပွောငျးအလဲလုပျမှာ မဟုတျသလို ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို သခြောပေါကျတကျမယျလို့ ကတိပေးပွောဆိုခဲ့တယျ။ ဂြာမနီအသငျးရဲ့ လကျကနျြနှဈပှဲကို ကွညျ့ရငျလညျး ဆှီဒငျ၊ တောငျကိုရီးယားအသငျးတို့နဲ့သာ ကစားရမှာဖွဈလို့ အခွအေနတေော့ ကောငျးနပေါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမှားလုပျလို့တော့ မရပါဘူး။ ဂြာမနီအသငျး အရငျ လကျရှိခနျြပီယံတှလေို ကံကွမ်မာဆိုးနဲ့ ရငျဆိုငျရမလား၊ ကြျောဖွတျနိုငျမလားဆိုတာတော့ လကျကနျြပှဲတှမှော အဖွပေျေါပါလိမျ့မယျ . . . .